Wadarta xirida: Talyaanigu wuxuu ku soo dhowaanayaa "Scenario 4"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Wadarta xiritaanka: Talyaanigu wuxuu ku soo dhowaanayaa "Scenario 4"
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wadarta xiritaanka: Talyaanigu wuxuu ku soo dhowaanayaa "Scenario 4"
Wadarta xiritaanka: Talyaanigu wuxuu ku soo dhowaanayaa "seenyo 4"
Dalka talyaaniga waxaa kusii kordhaya kacdoonka bulshada ee ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka dalka talyaaniga, kaas oo ay ka jiraan kooxo argagixiso, xagjir iyo Covid-19 kuwa diida ayaa mudaharaadaya. Heerarka cirka ee cirka isku shareeraya iyo xiisadaha sii kordhaya waxay ku soo dhoweynayaan Talyaaniga xiritaanka cusub ee magaalooyinka waaweyn.
Khubarada ka socota Machadka Caafimaadka ee Sare waxay tixgelinayaan 5 gobol - Lombardy, Campania, Liguria, Lazio, Valle d'Aosta, iyo ismaamulka gobolka Bolzano inay si gaar ah qatar ugu jiraan.
Milan, Naples, Bologna, Turin iyo Rome ayaa weli ah bartamaha dareenka.
Horaantii Isniinta, Nofeembar 2, mamnuucida safarka iyo xannibaadda dhammaan howlaha, marka laga reebo kuwa daruuriga ah, ayaa ka dhici kara caasimada Lombard, Milano: xiriirada macnaha ku jira ee u dhexeeya dowladda, Gobolka iyo Degmadu waa kuwo aad u daran. Tallaabooyinkani waxay markaa gaarsiin doonaan magaalooyin kale oo waaweyn iyo dhulkooda hoose haddii infekshannada laga ilaaliyo xakamaynta, waxay ku wargelinayaan hay'adda Corriere.it.
Infekshinka ilaa maanta lama xakameynayo. Maalintii afaraad oo isku xigta Talyaanigu wuxuu dhaafay rikoodhka infekshannada cusub marka la barbar dhigo 24-kii saac ee hore: 31,084, oo ay ku dhinteen 199 qof. Gobollada ugu daran waa Lombardy (+8.960), Campania (+3.186) iyo Veneto (+3.012). Intooda badani waxay leeyihiin Rt (tusmada faafa) oo ka weyn 1.25; in badan waxay ka badan tahay 1.5; gudaha Piedmont iyo Lombardy waxay ka koreysaa 2 (2.16 iyo 2.09).
Iyadoo lagu saleynayo xogta usbuucii u dhexeeyey 19 iyo 25 Oktoobar, Machadka Sare ee Caafimaadka ayaa sheegaya in "ay jirto suuragalnimo sare oo ah in 15 gobol ay ka badnaan doonaan xadka ugu muhiimsan ee daryeelka degdegga ah iyo / ama goobaha caafimaadka bisha xigta". Tirada dadka isbitaalada loo dhigay qeybaha dhibaatada ayaa ka bilaabatay 750 Oktoobar 18 ilaa 1,208 usbuuc kadib. Tirooyinkani waxay xoojinayaan deg-degga go'aannada adag, xitaa haddii ay dawladdu dafirto in laba maalmood gudahood dalka oo dhan lagu xidhi karo "sida Faransiiska". Dawladdu way beenisay, laakiin wasiir Amendola (Caafimaadka) kama saareyso maalmaha soo socda: "Haddii loo baahdo, waxaan qaadaneynaa culeyska doorashada."
Sida had iyo jeer ah, xarunta wadahadalka waxaa ku yaal iskuulka: fikradda ah in gebi ahaanba la xiro iskuulada ayaa sii xoogeysaneysa, wasiirka Azzolina (Waxbarashada) ayaa si isa soo taraysa ugu go'doomaysa difaaca waxbarida fool ka foolka ah. Xaaladda magaalada Milano waxaa lagu qeexaa inay tahay "wax qarxa" mas'uuliyiinta caafimaadka, iyadoo 230 xaaladood hal maalin ay ku jiraan ardayda iyo 4 kun oo "xiriiro dhow" ah oo loo diray karantiil, sidaas darteed boqolaal qoys oo ku xirnaa guryahooda habeenki iyo dhakhaatiirta carruurta oo jahwareersan.
Midka wali ka cagajiidaya xiritaanka waa PM Conte, laakiin RW laftiisa waa inuu ogaadaa taxaddarka, tartiib tartiib iyo u janjeera dib udhaca - astaamaha ka dhigay inuu caan ku noqdo wajiga koowaad ee masiibada - mar dambe ma bixin doono: “ Waqti qaado waqti dambe looma arko meher ahaan laakiin waxaa loo arkaa xad; waxayna doorashadu muujineysaa hoos u dhaca kalsoonida “.
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu hadda umuuqdaa mid u janjeera inuu la wadaago go'aannada kana hadlo baarlamaanka. Iyo "jihada la wadaago" waa dhab ahaan codsigii Carlo Verdelli ee tifaftirka: waxaa jira dib u dhiska cad ee wixii aan soo marnay - falcelinta wax ku oolka ah ee fayraska, badbaadada oo ku dhow in la gaaro horraantii Ogosto, ka dibna burburka markaan joogno halkaas ayaa la dhigay "qoob-ka-ciyaarka iyo heesaha" - iyo codsi riwaayad ah oo loo dirayo "dhammaan qabiilooyinka uu Talyaanigu ka kooban yahay" si loo midoobo "ugu yaraan waqtiga loo baahan yahay si looga hortago kuwa ugu xun ee soo socda".
Hawada kacdoonka ayaa ku soo kordheysa dalka: xalay waxay ahayd markii uu soo jeestay Florence. Nasiib wanaag waxaa jira wax wanaagsan, saxeex xitaa masiibadan: tusaale ahaan, daryeelka degdegga ah, koofiyadaha oksijiinta ayaa loo isticmaalaa in badan oo hawo farsamo xumo ayaa ka yar. Markaa waxaa jira dhaqaalaha, bukaan socod falcelis ah oo rubuc saddexaad ka dhigay GDP dib u soo kabashada 16% marka loo barbar dhigo kii hore: quful cusub ayaa qaboojin doona, laakiin waxay calaamad u tahay muhiimadda in lagu dheganaado, ayuu yidhi Di Vico Dhanka kale, xayiraadda shaqada laga joojiyay ayaa la kordhiyay illaa iyo Maarso.